Khilaaf ka dhashay qaabka uu u socdo shirka Kismaayo iyo Ergooyin isaga baxay – idalenews.com
Qaar ka mid ergooyinka ka qeyb galaya shirka ka socda magaalada Kismaayo ee maamul u sameynta Jubooyinka ayaa shirka isaga baxay, iyagoo sheegay in aanay ku faraxsaneyn qaabka wax u socdaan.
Ergooyinka ayaa ku eedeeyay Maamulka KMG ee Kismaayo inay shirka afduubteen, isla markaana tiradii oo lagu tala galay ee 500 eaheyd laga baday, kaasoo hada kor u dhaafaya ilaa kun qof.
Axmed Maxamed Xasan oo ka mid ah waxgaradka Beesha Sade oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay inay arkaan wax ka bedelan wixii ay filayeen, isla markaana shirka afduub lagu heysto.
“Wax ka bedelan wixii aan sugeynay ayaa nooga muuqda, shirka waxaa afduub u heysta Jabhada Raaskambooni, waxaa meesha nooga salaadiinti iyo odayaashi dhaqanka ee deegaanada kuwa la yaqaano ma ahan”ayuu yiri Axmed.
Shalay ayaa la sheegay in qaar ka mid ah ergada ay isaga baxeen shirka, kadib markii ay arkeen waxyaabo hareer marsan shirka, iyadoo qaabka shirka u socdo uu u muuqdo mid wax lala ordayo oo kale.
Dastuurka uu yeelanayo Maamulka Jubaland oo maalin ka hor la meel mariyay ayaa qodobada ku jira dastuurka uu yahay mid laga soo minguuriyay kan Maamulka Puntland oo la rumeysan yahay in taageerada ugu badan ee dhaqaale uu ku bixinayo shirka Kismaayo.
Xukuumada Soomaaliya ayaa mowqif cad iska taagtay shirka Kismaayo, markii todobaadkii hore is mari waa ku dhamaaday wada hadalada u dhaxeeyay wafdigii Ra’iisul Wasaaraha ee tagay Kismaayo iyo Maamulka KMG.